Jowhar.com : Somali Leader News - News: Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo gaaray degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe
April 24 2014 08:40:01
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM oo gaaray degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe
Ciidamo si xoog leh u hubeysan ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Warsheekh ee gobolka Sh/dhexe iyadoo aysan wax dagaal ah ka dhicin. Ciidamadan gaaray degmada Warsheekh ayaa isugu jira kuwo Soomaali ah iyo ciidamada dowlada Burundi ee ka mid ah AMISOM. Waaberigii saaka ayay ciidamadan ka tageen deegaanka Ceelmacaan waxaana ay gaareen degmada Warsheekh iyagoo sii maray tuulooyin hoos yimaada degmada.
Ma jirin wax ciidamo ah oo ururka Alshababa ka tirsan oo ku sugnaa degmada Warsheekh hase ahaatee bilooyinkii la soo dhaafay ayaan wax maamul ah ka jirin degmada marka laga reebo waxgaradka deegaanka oo is maamulayay. Ciidamada gaaray degmada Warsheekh ayaa fariisimo ka samaystay gudaha iyo hareeraha degmada Warsheekh.
Wararka ugu dambeeyay ee ka imanaya gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in laga yaabo in ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa dowlada ay gaaraan degmada Cadale ee gobolka Sh/dhexe halkaasoo la sheegay in ururka Alshabaab ay isaga baxeen degmada Cadale.
Degmada Warsheekh ayaa waxa ay ka mid noqonaysaa degmooyinka ugu dambeeyay ee ay ciidamada isbahaysanaya ay la wareegaan.
Jowhar.com741,439 unique visits